SIRNI GADAA Galmee Hambaalee UNESCO Keessatti Galmeeffame! – Oromedia
Home » Uncategorized » SIRNI GADAA Galmee Hambaalee UNESCO Keessatti Galmeeffame!
(SBO/VOL – MUDDE 01, 2016) Hundee sirna dimokrasii addunyaa tanaa kan tahe, SIRNI GADAA OROMOO, Galmee Hambaalee kan UNESCO (Dhaabbata Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa kan Tokkummaa Mootummootaa) irratti galmaahe. UNESCO’n Sirna Gadaa Galmee Hambaalee UNESCO irratti akka galmeeffamu kan taasise Kora isaa 11ffaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jirurratti.
Sirni Gadaa Ummanni Oromoo Jaarraa hedduuf ittiin walbulchaa ture bara sirni Dimokraasii amma addunyaan quba qabdu kun hin diriirfaminitti Ummata Oromootiin ittiin bulamaa turuu fi Hundee sirna Dimokraasii, bulchiinsaa, nagaa fi adeemsa aangoo karaa nagaan walii daddabarsuu addunyaatti kan beeksise sirna angafaa fakkii dimokraasii har’aa tahuu isaatiin galmee United Nations Education, Science and Cultural Organization (UNESCO) seenuutu ibsame.
Madda Sirna Dimokraasii fi Bulchiinsaa Ummata Oromoo kan tahe GADAAn erga OROMIYAAN sirna kolonii jalatti bittaa Habashootaaf saaxilamtee kaasee dhiibbaa, ukkaamsaa fi duula irratti gaggeeffameen qarqara dhabaa gahee, wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliin sabboonoo fi muratoon aadaa, Afaan, seenaa fi duudhaa, walumaagalatti EENYUMMAA OROMOO dhabamarraa oolchuuf baasaniin sadarkaa har’aarra gahee, Oromiyaa fi Afrikaarra dabree addunyaa guutuu irratti ifa baheera.
Aadaan, Qaroominnii fi Qabeenyi hundaa ol qaalii Ummanni Oromoo qabaachaa ture, barootaaf tuffatamee fi ukkaamamee turus, galatni sabboontota Oromoo fuula adda addaatiin hojii seena-qabeessa kana asiin gahuuf wareegama bifa adda addaa baasaniif haa tahuu, kunoo SIRNI GADAA OROMOO, Qabeenya addunyaa kunuunfamuu fi dhabamarraa tikfamuu qabu tahee, galmee Yuneeskoo (UNESCO) irratti galmaahuu dandahee jira. Kun Ummata Oromoo Jaarraa oliif mallattoon eenyummaa fi sirna dimokraasii isaa dhabamsiisfamuuf itti duulamaa bahee fi jiruuf, jaalattoota aadaa Oromoo fi cunqurfamtoota eenyummaa isaanii, aadaa fi afaan isaaniif falmaa gaggeessaa jiran maraaf INJIFANNOO fi MILKII guddaa dha. Gabroomfattoota eenymmaa Oromoo dhabamsiisuuf duulaa fi bu’uura sirna dimokraasii addunyaa kanaa tahe GADAA awwaaluuf bifa adda addaan fiigaa turanii fi diinnan Oromootiif ammoo gaddaa fi naasuu dha.
Haaluma walfakkaatuun bara dabre, 2015 wayta Korri UNESCO 10ffaan Naamiibiyaatti gaggeeffame sirni bulchiinsa Ummata Sidaamaa, Fiichee Cambalaalaa jedhamu, kan sirna Gadaa Oromootiin walfakkaatuu fi barootaaf ummanni Sidaamaa ittiin wal bulchaa bahe Galmee Hambaalee UNESCO dhaan galmaahuun ni yaadatama.
Kora Hambaalee UNESCO 11ffaa barana Finfinneetti hanga Muddee 3 bara 2016tti gaggeeffamu irratti Hambaaleen biyyoota adda addaa bakka bu’anis HAMBAA ADDUNYAA jedhamuun galmeeffamaniiru. Kanneen keessaayis Adeemsi Suphee gurraacha oomishuu POORCHUGAAL, agarsiisni muuziqaa fi Shubbisaa UGAANDAA Maadii jedhamu, Agarsiisa-muuziqaa Koozaakotaa YUKREEN akkasumas aadaan Muuziqaa Chaappaay Daang Veengi kan KAAMBOODIYAA bara kana balaaf saaxilamuun isaanii UNESCO dhaan adda bahuudhaan Galmee Balaa keessatti warreen galmeeffamanii dha jedha odeeffannoon arganne.
Sirni bulchiinsaa dimokraatawaan jireenya hawaasumaa fi diinagdee ummata Oromoo ittiin taligan kun, GALMEE HAMBAALEE ADDUNYAAtti galmaahuuf kan murtaa’e wayta UNESCOn Kora isaa barana handhuura biyya Oromoo, magaalaa gudditti Oromiyaa fi Afrikaa tan taate FINFINNEEtti gaggeeffataa jirutti tahuun ammoo seena-qabeessa fi gammachuu dachaa ti.
Ilmaan Oromoo maraan BAGA GAMMADDAN; BAGA GAMMADNE jechaa, hundee sirna dimokraasii, mallattoo nagaa fi tasgabbii, Asxaa Dagaaginaa fi Qaroominaa akkasumas Mallattoo EENYUMMAA OROMOO kan tahe, Sirna Gadaa tiksuu fi kunuunsuun dirqama lammummaa keenya tahuu haa hubannu jenna.
Ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa gaggeessaa jiru WAREEGAMAAN sadarkaa har’aatiin gahe, Wareegama feesisuun GABRUMMAAATTI XUMURA GOCHUUN biyya abbaa isaa, OROMIYAA irratti BILISUOOMEE sirna Bulchiinsa ganamaa, GADAA jalatti WALABUMMAAN jiraachuuf injifannoolee argaman tikfataa fi jabeessaa, akeeka qabsichaa galii maayiin gahuuf QBO fi FXG cimsuun dirqama isaa dachaan yeroon bahatu amma tahuus kanuma waliin dhaamna.
Irra deebi’uun Sabboontota hojii boonsaa fi seena-qabeessa kana dalagan maraan galanni keessan BILISUMMAA Oromoo fi WALABUMMAA Oromiyaa haa tahu BAGA GAMMADNE, BAGA GAMMADDAN jenna!!!
Previous: Gada system inscribed on UNESCO’s list of Intangible Cultural Heritage
Next: Oromo opposition leader arrested